Global Voices teny Malagasy » Miezaka Mandefa Ny Mpiasa Handao Asa Mialoha i Japana—Saingy Tsy Nahomby · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Marsa 2017 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Fanazavana: Natao hamohazana ny fahatsapana ny faharefoan'ny mpanjifa, manomboka androany (23 Febroary 2017) ny ‘Premium Fridays’ . Pikantsary avy amin'ny Fantsom-baovao ofisialy ANN .
Ny “Premium Friday ” dia ahafahan'ny mpiasa mitsahatra tsy miasa manomboka amin'ny 3 hariva isaky ny Zoma faran'ny volana, ary mandeha mivoaka miantsena, mijery sarimihetsika na fampiratiana any amin'ny mozea, na koa misakafo sy misotrosotro miaraka amin'ny namana sy fianakaviana. Raha mandray anjara amin'ny Zoma Premium ireo mpiasa manerana an'i Japana, tombanana mety hiakatra eo amin'ny  ¥124 tapitrisa (eo amin'ny 1,1 milliara dolara Amerikana) eo ny fandaniana manokana ao Japana .
Natao hamahana ireo olana roa ao Japana ny Zoma Premium: ny faharefoan'ny fandanian'ny mpanjifa sy izay hita fa kolontsain'ny asa tafahoatra. Raha lazaina amin'ny ankapobeny, tsy nihetsika  ny fandanian'ny mpanjifa ao Japana nandritra ny 20 taona mahery, indrindra hatramin'ny taompolo nisian'ny Fitontonganana Goavana .
Na dia eo aza ny antontan'isa avy amin'ny Fikambanam-Piarahamiasa sy Fampandrosoana Toekarena (OCDE) izay mampiseho fa vitsy ny ora iasan'ny mpiasa Japoney isan-taona raha oharina amin'ireo namany any amin'ny firenen-kafa, misy ny fiheverana fa lava loatra ny ora fiasàna ao Japana, ary misy ny zavatra tsy maintsy vitaina .
Nanangona karazana fanehoan-kevitra momba ny Zoma Premium ilay bilaogera Nyokike , manoratra ao amin'ny tranonkala Japoney Naver Matome . Ny olana lehibe amin'izany? Tsy manam-potoana handaozana ny asa mialoha ny olona.
Ny “Zoma Fampisehoana An-dalambe” (kin'yo rodosho, 金曜労働ショー) dia lalaon-tenin'ny fandaharana sarimihetsika amin'ny fahitalavitra amin'ny fotoana mahabe mpijery isaky ny Zoma hariva  sy ny teny Japoney midika hoe “asa”, rodo (労働).
Mety hoe manakana ny fanaovana ny Zoma Premium ihany koa ny fahavitsian'ny mpiasa ao amin'ny tsenan'ny asa ao Japana. Misy ankehitriny ny tsy fahampian'ny mpiasa ao Japana – misy asa 143 ho an'ny mpitady asa 100 ao Japana – ambany ny kalitaon'ny asa ao Japana . Tahaka ny ao Etazonia , Canada  sy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra , ambany ny karama ary maro amin'ireo asa no tapak'andro  na amin'ny fotoana voafetra fa tsy mpiasa raikitra .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/09/96511/
 Fantsom-baovao ofisialy ANN: https://youtu.be/UBOAl1SgybA
 Premium Friday: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/25/national/media-national/premium-friday-not-taking-holiday/#.WLoASDsrJhE
 mety hiakatra eo amin'ny : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/02/national/bid-curb-long-working-hours-ministry-plans-roll-premium-friday-campaign/#.WLzBKzsrJhF
 mpiasa Japoney latsaky ny 4 isan-jato : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/04/business/survey-finds-3-7-percent-workers-left-early-first-premium-friday/#.WLzKcDsrJhE
 tsy nihetsika: http://www.marketwatch.com/story/japans-consumer-spending-drops-despite-job-gains-2017-01-30
 taompolo nisian'ny Fitontonganana Goavana: http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?locations=JP
 ary misy ny zavatra tsy maintsy vitaina: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/20/reference/overworked-japan-slowly-adopting-fixed-rest-hours-put-end-karoshi/#.WLzKHzsrJhE
 fanehoan-kevitra momba ny Zoma Premium : https://matome.naver.jp/odai/2148794072979257001
 fandaharana sarimihetsika amin'ny fahitalavitra amin'ny fotoana mahabe mpijery isaky ny Zoma hariva: https://kinro.jointv.jp/
 5,8 isanjaton'ny orinasa manana mpiasa maherin'ny 1.000 : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/04/business/survey-finds-3-7-percent-workers-left-early-first-premium-friday/#.WLzvfzsrJhF
 kalitaon'ny asa ao Japana: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/21/national/media-national/uncertain-times-japan-opts-save/#.WLzyiTsrJhE
 Fanjakana Mitambatra: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-news-workers-zero-hours-contracts-rights-warning-a7565761.html
 ambany ny karama ary maro amin'ireo asa no tapak'andro: https://www.wsj.com/articles/japan-has-plenty-of-jobs-but-workers-still-struggle-1426197511